CEH v10 အဘယ်အရာရဲ့အသစ်? သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း Ethical Hacker ကအသိမှတ်ပြုလက်မှတ် v10
27 မာ 2018
CEH v10 အဘယ်အရာရဲ့အသစ်? v10 ကြေညာလိုက်သည်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း Ethical Hacker ကအသိမှတ်ပြုလက်မှတ်
CEH v10, Ethical Hacking သင်တန်းအမှတ်စဥ်ကြေညာလိုက်သည်
အဆိုပါ CEH v10 အသစ်ကဘာလဲ?
အဆိုပါ CEH လက်တွေ့ကဘာလဲ?
ဘယ်လို CEH v10 ယူနိုငျသလဲ
EC-Council မှအဆိုပါ CEH v10 အစီရင်ခံထားပါတယ် - ထိုထင်ရှားတဲ့လက်မှတ်ရ Ethical Hacker ကလက်မှတ်၏ဒသမလွှတ်ပေးရန်။
ဒါကြောင့်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလူ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာဟက်ကာလက်မှတ်အဖြစ်က၎င်း၏အနေအထားကိုတက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ရည်ရွယ်သကဲ့သို့ဆိုက်ဘာစွမ်းရည် webinar ၏ unscalable ပုံချုံ့ချဲ့မှာအခြားအဧရာ updates များကိုကြားတွင် Divulged, CEH v10 အဆိုပါလက်မှတ်အတွက်နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အဆိုပါ CEH 2003 ပြန်တတ်ခြင်းနှင့်တိုးတက်တိုးတက်လာဆုပ်ကိုင်ဖို့ပုံမှန်သက်သာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခု update ကိုသည်အတိုင်း, CEH လက်မှတ်အတွက် CEH v2015 ၏ dispatch အတူ9အတွက်လန်းဆန်းနောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်မှာရဲ့ Refresh 18 မှ module တွေ၏အရေအတွက်တိုးချဲ့ဖြန့်ဝေကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တစ်ဦးထက်ပိုထင်ရှားတဲ့မီးမောင်းထိုးတင်ပြခဲ့သည်။
အခြားအ EC-Council မှကြံရာပါအားဖြင့်နီးကပ်, Firebrand သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသောဤအရေးပါသော updates များကိုတစ်ဦး gander ယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွဲပေးကြဖို့ကြေငြာ webinar ထံသို့သွားလေ၏။
EC-Council မှတစ်ကမ္ဘာလုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏တောင်းဆိုမှုများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ CEH refresh မှဆက်လက်မလုပ်ဆောင်နေသည်။ ဒါက CEH v10 အသစ်ဖွင့်ကားအဘယ်သို့:
အရာများ၏အင်တာနက်ပေါ်ရှိတစ်ဦးက module (IoT) လုံခြုံရေး
မိုဃ်းတိမ်ကိုတိုက်ခိုက် virus သယ်ဆောင်, AI အများနှင့်စက်သင်ယူတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထား
လက်တွေ့ကတော့ CEH ၏တင်ဆက်မှု
2017 ရဲ့ Mirai botnet တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တူ - - CEH v10 အရာများ၏အင်တာနက်ကို (IoT) လုံခြုံရေးအပေါ်ကိုအာရုံအခြား module တစ်ခုတင်ပြပါလိမ့်မယ်လုံခြုံ IoT gadgets ၏မွေးမြူရေးအန္တရာယ်၏အလငျး၌။
ဒီမော်ဂျူးသူတို့က, စမ်းသပ်ရန်ပေးပို့နှင့် IoT gadgets ၏လုံခြုံရေးနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ရှိသည်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူကျွမ်းကျင်သူများကပြင်ဆင်ပါလိမ့်မယ်။
CEH ၏အသစ်ပုံစံထိုနည်းတူလက်ရှိခိုးမရှိဘူးအကဲဖြတ်အကြောင်းအရာ updated ပါလိမ့်မယ်။ အကာအကွယ်မဲ့အကဲဖြတ် hacking ဘဝ-သံသရာနှင့် v10 ၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းစစ်မှန်သောအခြေအနေများအတွက်အသုံးပြုမှုအားနည်းခြင်းစာမေးပွဲများ၏ profundity ချဲ့ထွင်လိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲ, စနစ်များကိုအကဲဖြတ်ဖို့လိုအပ်သောထုတ်ကုန်ကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မည်တူရိယာဟက်ကာများကိုအသုံးချရန်နှင့်မည်သို့အားနည်းချက်များအခြေချရန်။
ကျွမ်းကျင်သူများကမြင့်တက်တိုက်ခိုက်မှုများသည်မိုဃ်းတိမ်တိုးတက်မှုဆင်တူ virus သယ်ဆောင်, AI အများနှင့်စက်သင်ယူမှုတခုတခုအပေါ်မှာတိုးချဲ့မီးမောင်းထိုးမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ခွဲကို malware တိုက်ခိုက်မှုများကိုစောင့်ရှောက်အဆုံးသတ်ရည်မှန်းချက်နှင့်တိုက်ရိုက်အကူအညီမဲ့အကဲဖြတ်ဖို့ AI အများနှင့်စက်သင်ယူစဉ်းစားတက်လေပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ CEH v10 ထိုနည်းတူအဆိုပါ malware ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အတူခွဲကြှမျးဝငျပါလိမ့်မယ် - ထွက်ရှာဖွေမှတဆင့် malware များ၏အသုံးဝင်မှု, မွေးရပ်မြေနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုဆုံးဖြတ်ခြင်းများအတွက် technique ကို။
အသစ် CEH စာမေးပွဲဖြေဆိုင်း၏ဘိုးဘေးတို့ထံမှတစ်ဦးချွတ်စွပ်အရွယ်အစားအဖွဲ့အစည်းကိုတက်စောင့်ရှောက်:
စမ်းသပ်ခြင်း Duration:4နာရီ
စမ်းသပ်ခြင်း Delivery: ECC စာမေးပွဲတွင် VIEW
စာမေးပွဲရှေ့စာလုံး: 312-50 (ECC စာမေးပွဲတွင်), 312-50 (Vue)
အဆိုပါလက်မှတ်ရ Ethical Hacker (လက်တွေ့) ကို CEH လက်မှတ်တစ်ခုတိုးချဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Certified လုံခြုံရေးစိန်ခေါ်မှုဖို့ CEH အတွင်းပိုင်းညွှန်ကြားသည့်ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်လျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်မိမိတို့၏အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုသရုပ်ပြမျှော်ပြိုင်ဘက်ဖို့လက်လှမ်းကာအပိုနဲ့လိုသလိုစာမေးပွဲတွင်, ပါပဲ။
သင် CEH ရှိသည်သောချွတ်အခွင့်အလမ်းတွင်, သင်သည်ဤသူတို့၏ခွဲရဲ့စွမ်းရည်၏ခံထား၏ရမှတ်စုံစမ်းမည်အဆိုပြုစာမေးပွဲနှင့် EC-Council မှထိုင်ဖို့စွမ်းရည်ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလက်တွေ့စာမေးပွဲဖြေဆိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှကို virtual စက်တွေ, ကွန်ရက်များနှင့် applications များအသုံးချဖို့အားဖြင့်စစ်မှန်သောကော်ပိုရိတ်ကွန်ယက်ကိုတုပဖို့ရည်ရွယ်စေ့စေ့စပ်စပ်6နာရီစမ်းသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ CEH လက်တွေ့စာမေးပွဲဖြေဆိုလက်ရှိ CEH စာမေးပွဲဖြေဆိုဖို့သီးခြားဖြစ်ပါသည်နှင့်၎င်းတို့၏ထိုးထွင်းသိမြင် fabricating စောင့်ရှောက်ဖို့ခွဲတစ်ခုဖွင့်လှစ်တံခါးကိုဖြစ်ပါတယ်။ : ဤစမ်းသပ်ခြင်းကိုစမ်းသပ်မှတဆင့် breeze, သင်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်
တိုက်ခိုက်မှု virus သယ်ဆောင်၏ comprehension ပြရန်
OS ကိုနဖူးစည်းစာတန်းသိမ်းပိုက်ခံရခြင်း, အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် client ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း Perform ။
မူဘောင်ဟက်ကာ, Steganography, steganalysis တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်အဖုံးအပုဒ် Perform ။
အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ရောဂါကူးစက်မှုကိုအသုံးချရန်, ကွန်ပျူတာပိုးကောင်များနှင့်စနစ်များကို exploit မှ malware ။
packet ကို sniffing Perform ။
ဒါကြောင့်အပေါ် directory ကိုသွားလာလမ်းကြောင်း, parameter သည်လက်ဆော့မှု, XSS, နှင့်အပါအဝင် web server ကိုနဲ့ web application ကိုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဌန်ဦးဆောင်လမ်းပြ။
cryptography ကိုတိုက်ခိုက်မှု၏ထူးခြားသောအမြိုးမြိုး Perform ။
ရည်ရွယ်ချက်မှာအသင်းအဖွဲ့ရဲ့ကွန်ယက်လုံခြုံရေးထွက်ပေါက်ဝါကျ, စာပေးစာယူဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အဆုံးစနစ်များကိုအသိအမှတျပွုအားနည်းခြင်းစာမေးပွဲ Perform
အကျိုးစီးပွားများ၏ CEH လက်တွေ့စာမေးပွဲရမှတ်နေသောခေါင်းစဉ်:
အရှည်:6နာရီ
Accessibility: Aspen - iLabs
စမ်းသပ်ခြင်းစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ: iLabs ဆိုက်ဘာ Range
သင့်တဘက်၌ထသွားနှင့်သေး CEH v10 ပြီးမြောက်နိုင်ဘူးနေစဉ်, ယင်း ယခုအသက်ရှင် CEH သင်တန်းများသို့သစ်ကိုပညာပေးအစီအစဉ်များကို join ဖို့ရွေ့လျားနေသည်။ နေဖို့အတှကျတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကရိနာစွဲနေ့စွဲအဘို့အညှိ CEH v10 ။
ရုံ5နေ့ရက်များအတွက်
အဘယ်ကြောင့်သင်တစ်ဦး CISSP လက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးရသင့်သလဲ
လက်မှတ်ရ Ethical Hacker (CEH) အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်၏အကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလဲ